US မှာ, 7-Eleven ၏စူပါမားကက်ကိုယခုနှစ်မကုန်မီ CBD ထုတ်ကုန်ပူဇော်သွားကြသည်.
ထိုကောင်းစွာ cannabidiol များအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအောင်မြင်မှုများကိုခေါ်စေခြင်းငှါ, because the chain is the world’s largest in terms of number of stores – 7-Eleven has more branches than McDonald’s!
CBD ထုတ်လုပ်သူများအတွက် Megadeal
သငျသညျအဲလ်ဘတ် Heijn နှင့်ဂျမ်ဘိုအတူတကွနှင့်အတူ, 7-Eleven နှိုင်းယှဉ်နိုင်, so large and influential is the chain of ‘convenience stores’ in the US.
အများစုမှာစတိုးဆိုင်ကိုလည်းပွင့်လင်းကြသည် 24/7 အိမ်သို့ America မှာ မှလွဲ., သူတို့ထဲမှာရှိပါတယ် 17 အခြားနိုင်ငံများ, ဂျပန်အပါအဝင်, မက္ကစီကို, သြစတြေးလျနှင့်တရုတ်.
ဇန်နဝါရီလအစပိုင်းမှာ, ကွင်းဆက်တစ်ဦးစုစုပေါင်းရှိခဲ့ 64,319 အကိုင်းအခက်, ဒါကြောင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာ, 7-Eleven ဒီနှစ်နောက်တဖန် CBD ထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းကိုစတငျမညျဖွစျကွောငျးကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပါတယ်.
CBD ရေနံကိုဝယ်? Visit the CBD Shops Page.
It is specifically the CBD products of ဖီးနစ်မျက်ရည် ,acompany that is based in – how could it be otherwise – Colorado.
ဖီးနစ်မျက်ရည်အဆိုပါ CBD စျေးကွက်နှင့်နောက်ပိုင်းအဓိကကုမ္ပဏီကြီးများ၏တဦးတည်းစဉ်းစားသည် 2010 က cannabidiol ထုတ်ကုန်သုတေသနနှင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီး
အချိန်အတောအတွင်း, အချို့သော 140 (!) ကွဲပြားခြားနားသောဖော်မြူလာပြီးသားစျေးကွက်ပေါ်တွင်တင်ပြီ.
မမြျှောလငျ့ဘဲ, အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ထုတ်ကုန်လျှော်ထံမှနှင့်မ CBD-ကြွယ်ဝသောဆေးခြောက်ကနေထားကြပါတယ်.
ခုလတ်တလောမှာတော့, 7-Eleven မှာသူတို့ရဲ့ CBD ထုတ်ကုန်များလိပ်ထွက်အဓိကအားနီဗားဒါးများ၏ပြည်နယ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်, ကော်လိုရာဒို, မက်ဆာချူးဆက်, အီလီနွိုက်, မေရီလန်း, ဝါရှင်တန်, DC က, ဖလော်ရီဒါနှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယား, according to အဆိုပါသတင်းထုတ်ပြန်ချက် that announced the deal on Tuesday.
ထိုစားသုံးသူကအနည်းဆုံးအတွက် CBD ဝယ်ယူရန်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည် 4,500 7-က Eleven စတိုးဆိုင်မကုန်မီ 2018, ထက်ပိုပြီးမှထမြောက်ကြလိမ့်မည်တဲ့အရေအတွက်က 7,000 သုံးနှစ်အတွင်းအဆင်ပြေစျေးကွက်.
“We are excited that 7-Eleven brings the Phoenix Tears product line to millions of Americans, သောဤစင်ကြယ်သော-သဘောသဘာဝကနေအကြိုးပွုနိုငျ, ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်သက်သေပြအခြားရွေးချယ်စရာကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်,” says founder Janet Rosendahl-Sweeney of the CBD brand.
'' ကြောင်းမှထည့်သွင်းခြင်း; this agreement confirms our belief that the status of CBD asamainstream wellness option is there.
ကျနော်တို့ထိရောက်သောနှင့်အတူခေတ်သစ်တစ်ခုရိုက်ထည့်ရန်စိတ်အားထက်သန်နေကြသည်, ဒေသခံအဆင်ပြေစတိုးဆိုင်များမှာယခုအလွယ်တကူရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်းဘက်စုံနှင့်လျှော်-based ဖြည့်စွက်. “
စီးပွားရေးမဂ္ဂဇင်း Forbes မဂ္ဂဇင်းအဆိုအရ, အဆိုပါ CBD စျေးကွက်ရွှေကြိမ်မျှော်လင့်နေပါတယ်: အားဖြင့် 2020 ဒါကြောင့်မနည်းထက်တိုးလိုက်ပါတယ် 700 ရာခိုင်နှုန်းကို!
CBD ရေနံကိုဝယ်? View Trusted addresses.
CBDOlieVoordeel.nl မူလစာမျက်နှာ | CBD ရေနံ Stores | အတွေ့အကြုံများ | CBD ရေနံလမ်းညွှန်
Categories CBD ရေနံTags7Eleven, CBD ရေနံ, cbd oil drops, ဘယ်မှာ CBD ရေနံဘယ်လ်ဂျီယံကိုဝယ်ခြင်းငှါ, ဘယ်မှာ CBD ရေနံ Holland ဝယ်ဖို့	Post navigation